Namuhla, uma yimfashini bazicabangele njengabangcono izinikele ezihlukahlukene izinkolo, abanye abantu bazama ukugcizelela ngokuntula kwakhe ukholo kuNkulunkulu, bazibiza abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngobani abaphikiNkulunkulu? Ingabe umuntu ophika inkolelo kaNkulunkulu (Allah) ukubiza akakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona? Yiziphi enjalo abangakholelwa kuNkulunkulu banesithakazelo owaziwa ngokuthi Friedrich Engels, Umshicilelo uPetru Gannushkina, Vitaly Ginzburg, Evgraf Duluman nabalandeli babo? Ake siphenye.
Atheism - a term okuyinto uhumusha njengoba "abangamhloniphi uNkulunkulu." Kwafika umqondo eFrance, kodwa ihlanganisa zonke izinhlobo uyaphika uNkulunkulu nenkolo bekungekho. Abakholelwa ukuthi uNkulunkulu akekho abakholelwa ukuthi iyiphi inkolo - kuyinto ukwazi ukukhohlisa, esekelwe nokunqatshelwa engokwemvelo zomhlaba. AbaphikiNkulunkulu zihluke amakholwa azo zonke izinkolo? Lo mqeqeshi owake wapheka akholelwa ukuthi isimo sezinto zemvelo, futhi inkolo, noma ingase, kusungulwe abantu. Eyesibili, ngokuphambene bakholelwa ukuthi uNkulunkulu (e yiziphi izenzo) kuyinto eyinhloko, futhi izwe - Ayive imnandi indalo yakhe. UNkulunkulu akekho azibonayo ngokoqobo ngokutadisha futhi ukuqonda ke. Njalo mkhuba abazama ukuthola incazelo ngokwesayensi.
Ingabe bonke abantu abakholelwa kwendlela uNkulunkulu asungula ngayo emhlabeni futhi ezakho yimiphi amahlelo kungaba kubhekwe abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona? Cha, akubona bonke. Ngobani abaphikiNkulunkulu? Abantu ababeke lo ukungalethembi nokuphishekela okwakwaziwa ososayensi emhlabeni oluyisisekelo yekuphila. Bathwala ngokungakholwa kwabo emhlabeni, kodwa hhayi ukutshala ngamandla, bese uzama ukufundisa abantu. Ungenza lokhu kokwazi kahle kuphela umlando nezimfundiso zenkolo kanye nezici esithile sokholo. Abantu bamane nje ekwenqabeleni yabo ukholo kuNkulunkulu, kodwa labo abakholwa izipoki, druids, Cthulhu, barabashek noma kwezinye izimpawu, ukubona ezingaqondakali, abangakholelwa kuNkulunkulu banesithakazelo bazibheke bengayi.
Handbook ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona
Ezikhathini zaseSoviet, abafundisayo ngisho ekhiqizwa isabelo esikhethekile. Lalibizwa ngokuthi "Handbook ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona." Iqondiswe kushicilelwe Bebekhona abasebenzi, abafundi, othisha. Le ncwadi engalingani. Ngakolunye uhlangothi, le ncwadi yanikeza izimpendulo ezicacile zale mibuzo "Ngobani abaphikiNkulunkulu?", "Usontaphi?". Abasebenzi emanyuvesi kanye ososayensi abaziwayo, owaba nengxenye ekulungiseleleni izinhlelo zokusebenza linikeze futhi kuso (wabizwa ngokuthi "Sputnik ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona '), wethula umlando zezinhlangano zenkolo kanye izitayela, izici zabo. Compilers waxwayisa ngezingozi elandelayo izimfundiso ongenabugovu futhi umdlavuza ukholo abayizimpumputhe. Ngakolunye uhlangothi, le ncwadi kwakuhluke kakhulu politicized futhi wayevame izimfanelo izinkolo, hhayi ngokuya impumelelo yezesayensi, kodwa kusuka isikhundla partisanship futhi yekuphila. Lokhu isethulo akuyena ngaso sonke isikhathi ngendlela ehlukile probative. Namuhla, ukushicilelwa iyathakazelisa abangakholelwa kuNkulunkulu banesithakazelo yesimanje kanye abaqoqi amabhuku ezingavamile (nakuba ezingavamile izinzuzo mass kwegazi ngeke uqambe).
Ngakho, abaphikiNkulunkulu real - they are ntu bani:
- ukuzwa ngezwe izindlela zesayensi;
- baqaphela ukubaluleka eziwumgogodla lomuntu njengomuntu ngamunye hhayi njengesixuku umlandeli izimfundiso;
- cabanga inhlalakahle yomuntu umbandela esiyinhloko ukuthuthukiswa kunoma yimuphi umphakathi;
- musa ulwa inkolo futhi baqhube umsebenzi ochazayo, bathi imibono yethu futhi avikele amalungelo abantu.
Othile kusuka omkhulu wathi ukuthi akekho uNkulunkulu - kungcono omunye nje inkolo. Kulesi sitatimende kukhona amabele eyizingqabavu: amakholwa abakholelwa kuNkulunkulu, nabathi akekho - ukuze ukungathembeki futhi ngamandla esayensi.
I-Barcarol - ingabe uhlobo lwezinhlobo zabantu, noma ingabe lusezingeni lobuchwepheshe?